Ezr 8 | Shona | STEP | Zvino ava ndivo vakuru vedzimba dzamadzibaba avo, uye ndiwo mazita avakabva neni Bhabhironi, panguva yokubata ushe kwamambo Aritashasita.
Mazita avaJudha vakandosvika Jerusaremu naEzira
1 Zvino ava ndivo vakuru vedzimba
dzamadzibaba avo, uye ndiwo mazita avakabva neni Bhabhironi, panguva yokubata ushe kwamambo Aritashasita. 2Pakati pavanakomana vaPinehasi, Gerishomi; pakati pavanakomana vaItamari, Dhanyeri; pakati pavanakomana vaDhavhidhi, Hatushi.
3Pakati pavanakomana vaShekania, pakati pavanakomana vaParoshi, Zekariya, uye pamwechete naye vakaverenga mazita avarume vane zana namakumi mashanu. 4Pakati pavanakomana vaPahatimoabhi, Eriehoenai mwanakomana waZerahia; uye pamwechete naye varume vana mazana maviri.
5Pakati pavanakomana vaShekania, mwanakomana waJahazieri, uye pamwechete naye varume vana mazana matatu.
6Pakati pavanakomana vaAdhini, Ebhedhi mwanakomana waJonatani; uye pamwechete naye varume vana makumi mashanu. 7Pakati pavanakomana vaErami, Jeshaya mwanakomana waAtaria; uye pamwechete naye varume vana makumi manomwe. 8Pakati pavanakomana vaShefatia, Zebhadhia mwanakomana waMikaeri; uye pamwechete naye varume vana makumi masere. 9Pakati pavanakomana vaJoabhi, Obhadhiya mwanakomana waJehieri; uye pamwechete naye varume vana mazana maviri negumi navasere. 10Pakati pavanakomana vaSheromiti, mwanakomana waJosifiya, uye pamwechete naye varume vane zana namakumi matanhatu. 11Pakati pavanakomana vaBhebhai, Zekariya mwanakomana waBhebhai; uye pamwechete naye varume vana makumi maviri navasere. 12Pakati pavanakomana vaAzagadhi, Johanani mwanakomana waHakatani; uye pamwechete naye varume vane zana negumi rimwe. 13Pakati pavanakomana vaAdhonikami, ivo vokupedzisira, mazita avo ndiwo: Erifereti, naJeueri, naShemaya; uye pamwechete navo varume vana makumi matanhatu. 14Pakati pavanakomana vaBhigivhai, Utai naZabhudhi; uye pamwechete navo varume vana makumi manomwe.
15Ndikavakokera vose parwizi runoenda Ahavha; tikagarapo pamisasa mazuva matatu; ndikacherekedza vanhu navapirisiti, ndikashaiwapo kunyange nomumwe wavanakomana vaRevhi.
16Ipapo ndikatuma nhume kuzodana Eriezeri, naArieri, naShemaya, naErinatani, naJaribhati, naErinatani, naNatani, naZekariya, naMeshurami, vaiva vakuru; uye Joyaribhi, naErinatani, vaiva vadzidzisi. 17Ndikavatuma kuna Idho, waiva mukuru panzvimbo yainzi Kasifia; ndikavaudza zvavaifanira kutaura kuna Idho, nehama dzake vaNetinimi, panzvimbo yainzi Kasifia, kuti vauye kwatiri navabatiri veimba yaMwari wedu. 18Zvino ruoko rwakanaka rwaMwari wedu rwakanga ruri pamusoro pedu, saka vakauya kwatiri nomunhu akangwara wavana vaMari, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waIsiraeri; naSherebhia, navanakomana vake nehama dzake vose gumi navasere; 19naHashabhiya, uye pamwechete naye Jeshaya wavanakomana vaMerari, nehama dzake navanakomana vavo, vose makumi maviri; 20napakati pavaNetinimi, vakanga vagadzwa naDhavhidhi namachinda pabasa ravaRevhi, vaNetinimi vana mazana maviri namakumi maviri; vose vakanga vakanyorwa mazita avo.
21Ipapo ndakatara nguva yokuzvinyima zvokudya parwizi Ahavha, kuti tizvininipise pamberi paMwari wedu, tizvikumbirire kwaari isu nepwere dzedu nefuma yedu yose nzira yakarurama.
22Nokuti ndakanyara kukumbira kuna mambo boka ravarwi navatasvi vamabhiza kutibatsira kurwa navavengi panzira; nokuti takanga tataura namambo, tichiti, "Ruoko rwaMwari wedu runochengeta vose vanomutsvaka, kuvaitira zvakanaka; asi simba rake nokutsamwa kwake zvinorwa navose vanomurasha."
23Naizvozvo takazvinyima zvokudya, tikanyengetera kuna Mwari wedu pamusoro paizvozvi, akatinzwa.
24Ipapo ndakatsaura vane gumi navaviri pakati pavakuru vavapirisiti, vaiti, Sherebhia, naHashabhiya, nedzimwe hama dzavo dzine gumi pamwechete navo; 25ndikavayerera sirivha, nendarama, nemidziyo, icho chipo chakanga chapiwa imba yaMwari wedu namambo, namakurukota ake, namachinda, navaIsiraeri vose vakanga varipo. 26Ndakayerera pamaoko avo matarenda esirivha ana mazana matanhatu namakumi mashanu, nemidziyo yesirivha yakasvika matarenda ane zana, neyendarama yakasvika matarenda ane zana; 27nembiya dzina makumi maviri dzendarama yakasvika madhariki ane chiuru chimwe; nemidziyo miviri yendarira yakanga yakaisvonaka, yaibwinya, yaikosha sendarama. 28Ndikati kwavari, "Imi muri vatsvene vaJehovha, nemidziyo mitsvenewo; uye sirivha nendarama ndizvo zvipo zvokungopa nokuzvidira zvakavigirwa Jehovha Mwari wamadzibaba enyu. 29Muzvirindire, nokuzvichengeta, kusvikira mozviyera pamberi pavakuru, vavapirisiti navaRevhi, namachinda edzimba dzamadzibaba avaIsiraeri paJerusaremu, mumakamuri eimba yaJehovha." 30Naizvozvo vapirisiti navaRevhi vakagamuchira sirivha, nendarama, nemidziyo, vayererwa kurema kwazvo, kuti vazviise Jerusaremu paimba yaMwari wedu.
31Ipapo takabva parwizi Ahavha nezuva regumi namaviri romwedzi wokutanga, tichienda Jerusaremu; ruoko rwaMwari wedu rukatichengeta; akatirwira pamaoko avavengi vedu navakanga vakativandira panzira. 32Tikasvika Jerusaremu, tikagarapo mazuva matatu. 33Zvino pazuva rechina kurema kwesirivha, nendarama, nemidziyo zvakayerwa muimba yaMwari wedu, zvikaiswa pamaoko aMeremoti mwanakomana womupirisiti Uriya; Ereazari mwanakomana waPinehasi akanga anaye, uye Jozabhadhi mwanakomana waJeshua, naNowadhia mwanakomana waBhinui, ivo vaRevhi, vakanga vanavo.
34Zvose zvakaverengwa nokuyerwa kurema kwazvo ; kurema kwose kukanyorwa nenguva
35Zvino vatapwa, vakanga vadzoka pakutapwa, vakapisira Mwari waIsiraeri chipiriso chinopiswa, nzombe dzine gumi nembiri dzavaIsiraeri vose, namakondohwe makumi mapfumbamwe navatanhatu, namakwayana makumi manomwe namanomwe, nenhongo dzembudzi dzine gumi nembiri, chive chipiriso chezvivi; izvozvo zvose chaiva chipiriso chakapisirwa Jehovha. 36Zvirevo zvamambo vakazvipa machinda amambo, navabati mhiri kworwizi, ivo vakabatsira vanhu neimba yaMwari.